Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Myanmar Engineers Forum The Myanmar Environmental Forum • View topic - လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ယူနစ်ဈေးနှုန်း တက်လာခြင်းကိစ္စ
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ယူနစ်ဈေးနှုန်း တက်လာခြင်းကိစ္စ
by acmv » Thu Oct 31, 2013 6:40 pm
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ယူနစ်ဈေးနှုန်း တက်လာခြင်းကိစ္စ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် စာရေးသူ ၂၀၁၃ခု ဧပြီလ (၃၀)ရက်နေ့က ရေးခဲ့သည့် စာစု ကို ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါသည်...။
နိုင်ငံတော်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး နိုင်သော စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များစွာ ရှိနေပါလျက်နှင့် ယခုကဲ့သို့ ဆင်းရဲနွမ်းပါး၊ ဒုက္ခ ရောက်နေသော ပြည်သူတို့ကို ထပ်ဆောင်း၍ ၀န်ထုပ်ကြီး ဖြင့် ဖိ လိုက်ခြင်း မှာ လုံးဝ မှားယွင်းပြီး လက်မခံ နိုင်စရာ လုပ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်သည်...။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းချလိုက်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပမာဏမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ် တို့ ကို လည်း ဘာအတွက်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ပြန်လည် အသုံးချနေကြောင်း စသဖြင့် ပြည်သူ တို့ သိရှိရန် ရှင်းလင်းခြင်း၊ စာရင်းဇယား ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိ သလောက်ပဲဟု ဝေဖန်မှုများ ကြားနေရပေသည်။
သြော်.....လျှပ်စစ် စွမ်းအား၊ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ....... ရွှေနိုင်ငံသစ် နေ့စဉ်သတင်းစာ ဧ။် သတင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှ တစ်ပိုဒ်...... ” ပြည်တွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းချထားသည့် ဂက်စ် ကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရချင်း နားလည်မှုရယူကာ အနည်းငယ်ပြန်ယူထားကြောင်း၊ ယင်း ဂက်စ်ကို ပြည်တွင်းရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြု၍ ရရှိလာသော လျှပ်စစ်ကို ပြည်တွင်း တွင် ဖြန့်ဝေသွားရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း...၊ စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် ဧ။် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ၀န်းကျင်သာ ပေးနိုင်မှုကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ စွမ်းပြည့် မလည်ပတ်နိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ပြောသည်...။” လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မလုံလောက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အ၀င်နည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြား အကြောင်း ခြင်းရာ များစွာလည်းပါဝင်နေသည် မှန်သော်လည်း လျှပ်စစ်ဧ။် အခန်းကဏ္ဍသည် အားလုံးထက် ပိုအရေးပါနေသည်မှာ ငြင်း နိုင်မည် မဟုတ်...။ စာရေးသူတို့ နိုင်ငံတွင် ဂက်စ် ခေါ် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ များစွာထွက်သော်လည်း မိမိနိုင်ငံဧ။် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် အတွက် လျှပ်စစ်ထုတ်ရန် အသုံးမပြုပဲ နိုင်ငံခြားသို့ အလုံးအရင်း ရောင်းချခဲ့သည်...။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ၊ ရည်ရွယ်ချက် အဖုံဖုံဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ကို ရောင်းချလိုက်ခြင်းကြောင့် ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နဂိုမူလ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် ရှိနေ၊လုံလောက်နေပါလျက်နှင့် စွမ်းအင် ဆာလောင် မွတ်သိပ်သည့် ဘ၀သို့ သက်ဆင်းရပါတော့သည်...။ နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လာစေလိုလျှင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ပထမဦးစားပေး လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်ကို မည်သူငြင်းနိုင်ပါမည်နည်း...။ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို ဦးဆုံးဖြည့်ဆည်းပြီးမှ နိုင်ငံခြားသို့ရောင်းချသင့်သည်။ နိုင်ငံခြားသို့ ရောင်းချလျှင်လည်း နိုင်ငံတော်က ရရှိ သည့်ဝင်ငွေအား ထင်သာမြင်သာအောင် လုပ်သင့်သည်...။ ပြီးတော့၊ ယင်းဝင်ငွေဖြင့် နိုင်ငံတော် ဖွံ့  ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေး သနည်းဆိုတာကို ပြည်သူသို့ တင်ပြ ကြေညာသင့်သည်။ စာရေးသူသည် လျှပ်စစ်ပညာရပ်ကို အတော်အသင့် သိသူဖြစ်၍ ” လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ပိုလျှံလို့ ရောင်းရသည် ” ဟူသောပြောဆို အကြောင်းပြချက်ကို ပြည်သူတွေ ဟားတိုက်ခဲ့ကြောင်း ကြားဖူးသည်။ လျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ ဘယ်တော့မှ ပိုသည်မရှိ...၊ လျှပ်စစ်ဧ။် သဘောတရားကို ရှင်းပြရမည်ဆိုလျှင် ၊ လျှပ်စစ်ထုတ်စက် (Generator) မှ ထွက်လာသောဓါတ်အားကို လျှပ်စစ်စွမ်းအား (Electric Power)၊ မဂ္ဂါ ၀ပ် (MW) ဖြင့်တိုင်းသည်။ မဂ္ဂါဝပ် မှာ ကီလိုဝပ် (KW) ဧ။် အဆ ၁၀၀၀ ရှိသည်။ ထွက်လာသော စွမ်းအားပမာဏကို အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရလျှင် စက်ရုံ ၊ အိမ် ၊ ရုံး တွင်ရှိသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကသုံးသည်။ သုံးသလောက်သာ ယင်း ထုတ်စက်က ထုတ်ပေးသည်။ ဘယ်တော့မှ သုံးသလောက်ထက် ပိုထုတ်မပေးပါ...။ လျှပ်စစ်ထုတ်စက် သည် အလွန် သစ္စာရှိသည်...။ ၀န် (Load ) ဧ။် လိုအပ်ချက်အတိုင်း အမြဲ ထုတ်ပေးသည်။ ၀န် က ဘာအမိန့်မှ ပေးစရာမလို ၊ ခလုတ်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အလုံးစုံ ပြီးမြောက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်... သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကိုနိုင်ငံခြားသို့ အလုံးအရင်း ရောင်းချလိုက်ပြီးမှ သူတို့ဆီကပြန်တောင်းရသည့် အဖြစ်သနစ် သည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့သည်ပဲ ပြောပြော၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်သည်ပဲ ဆိုဆို၊ လုပ်ရပ်ကတော့ လုံးဝလွဲမှား နေရုံသာမက လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်နေသည်။ စင်ကာပူတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို ဂက်စ်တာဘိုင် မောင်းသော လျှပ်စစ်ထုတ်စက်များဖြင့် ထုတ်သည်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့  ကို ပိုက်လိုင်းများဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ သွယ်တန်းဝယ်ယူသည်။ ရန်ကုန်မြို့  လောက် ကျယ်ဝန်းသော စင်ကာပူ တစ်နိုင်ငံလုံးကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ စင်ကာပူဧ။် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးဧ။် လိုအပ်ချက်ထက်ပင်များမည်ဟု ခန့်မှန်းရဧ။်...။
သည်လိုနိုင်ငံငယ်မှာတောင် လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းနိုင်သေးလျှင်... စာရေးသူတို့ နိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ပါသနည်း?? ဤ မေးခွန်းထဲတွင် အဖြေရှိနေပါလျက်နှင့် အဖြေရှာမတွေ့  ပါ ခင်ဗျား......။
သြော်.....လျှပ်စစ် စွမ်းအား၊ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ....... ရွှေနိုင်ငံသစ် နေ့စဉ်သတင်းစာ ဧ။် သတင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှ တစ်ပိုဒ်...... ” ပြည်တွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းချထားသည့် ဂက်စ် ကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရချင်း နားလည်မှုရယူကာ အနည်းငယ်ပြန်ယူထားကြောင်း၊ ယင်း ဂက်စ်ကို ပြည်တွင်းရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြု၍ ရရှိလာသော လျှပ်စစ်ကို ပြည်တွင်း တွင် ဖြန့်ဝေသွားရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း...၊ စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် ဧ။် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ၀န်းကျင်သာ ပေးနိုင်မှုကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ စွမ်းပြည့် မလည်ပတ်နိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ပြောသည်...။” လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မလုံလောက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အ၀င်နည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြား အကြောင်း ခြင်းရာ များစွာလည်းပါဝင်နေသည် မှန်သော်လည်း လျှပ်စစ်ဧ။် အခန်းကဏ္ဍသည် အားလုံးထက် ပိုအရေးပါနေသည်မှာ ငြင်း နိုင်မည် မဟုတ်...။ စာရေးသူတို့ နိုင်ငံတွင် ဂက်စ် ခေါ် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ များစွာထွက်သော်လည်း မိမိနိုင်ငံဧ။် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် အတွက် လျှပ်စစ်ထုတ်ရန် အသုံးမပြုပဲ နိုင်ငံခြားသို့ အလုံးအရင်း ရောင်းချခဲ့သည်...။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ၊ ရည်ရွယ်ချက် အဖုံဖုံဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ကို ရောင်းချလိုက်ခြင်းကြောင့် ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နဂိုမူလ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် ရှိနေ၊လုံလောက်နေပါလျက်နှင့် စွမ်းအင် ဆာလောင် မွတ်သိပ်သည့် ဘ၀သို့ သက်ဆင်းရပါတော့သည်...။ နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လာစေလိုလျှင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ပထမဦးစားပေး လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်ကို မည်သူငြင်းနိုင်ပါမည်နည်း...။ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို ဦးဆုံးဖြည့်ဆည်းပြီးမှ နိုင်ငံခြားသို့ရောင်းချသင့်သည်။ နိုင်ငံခြားသို့ ရောင်းချလျှင်လည်း နိုင်ငံတော်က ရရှိ သည့်ဝင်ငွေအား ထင်သာမြင်သာအောင် လုပ်သင့်သည်...။ ပြီးတော့၊ ယင်းဝင်ငွေဖြင့် နိုင်ငံတော် ဖွံ့  ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေး သနည်းဆိုတာကို ပြည်သူသို့ တင်ပြ ကြေညာသင့်သည်။ စာရေးသူသည် လျှပ်စစ်ပညာရပ်ကို အတော်အသင့် သိသူဖြစ်၍ ” လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ပိုလျှံလို့ ရောင်းရသည် ” ဟူသောပြောဆို အကြောင်းပြချက်ကို ပြည်သူတွေ ဟားတိုက်ခဲ့ကြောင်း ကြားဖူးသည်။ လျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ ဘယ်တော့မှ ပိုသည်မရှိ...၊ လျှပ်စစ်ဧ။် သဘောတရားကို ရှင်းပြရမည်ဆိုလျှင် ၊ လျှပ်စစ်ထုတ်စက် (Generator) မှ ထွက်လာသောဓါတ်အားကို လျှပ်စစ်စွမ်းအား (Electric Power)၊ မဂ္ဂါ ၀ပ် (MW) ဖြင့်တိုင်းသည်။ မဂ္ဂါဝပ် မှာ ကီလိုဝပ် (KW) ဧ။် အဆ ၁၀၀၀ ရှိသည်။ ထွက်လာသော စွမ်းအားပမာဏကို အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရလျှင် စက်ရုံ ၊ အိမ် ၊ ရုံး တွင်ရှိသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကသုံးသည်။ သုံးသလောက်သာ ယင်း ထုတ်စက်က ထုတ်ပေးသည်။ ဘယ်တော့မှ သုံးသလောက်ထက် ပိုထုတ်မပေးပါ...။ လျှပ်စစ်ထုတ်စက် သည် အလွန် သစ္စာရှိသည်...။ ၀န် (Load ) ဧ။် လိုအပ်ချက်အတိုင်း အမြဲ ထုတ်ပေးသည်။ ၀န် က ဘာအမိန့်မှ ပေးစရာမလို ၊ ခလုတ်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အလုံးစုံ ပြီးမြောက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်... သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကိုနိုင်ငံခြားသို့ အလုံးအရင်း ရောင်းချလိုက်ပြီးမှ သူတို့ဆီကပြန်တောင်းရသည့် အဖြစ်သနစ် သည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့သည်ပဲ ပြောပြော၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်သည်ပဲ ဆိုဆို၊ လုပ်ရပ်ကတော့ လုံးဝလွဲမှား နေရုံသာမက လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်နေသည်။ စင်ကာပူတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို ဂက်စ်တာဘိုင် မောင်းသော လျှပ်စစ်ထုတ်စက်များဖြင့် ထုတ်သည်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့  ကို ပိုက်လိုင်းများဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ သွယ်တန်းဝယ်ယူသည်။ ရန်ကုန်မြို့  လောက် ကျယ်ဝန်းသော စင်ကာပူ တစ်နိုင်ငံလုံးကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ စင်ကာပူဧ။် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးဧ။် လိုအပ်ချက်ထက်ပင်များမည်ဟု ခန့်မှန်းရဧ။်...။ သည်လိုနိုင်ငံငယ်မှာတောင် လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းနိုင်သေးလျှင်... စာရေးသူတို့ နိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ပါသနည်း?? ဤ မေးခွန်းထဲတွင် အဖြေရှိနေပါလျက်နှင့် အဖြေရှာမတွေ့  ပါ ခင်ဗျား......။